Horudhac: Barcelona vs Osasuna… (Kooxda Catalan oo doonaysa inay dib ugu soo laabato wadada guusha ee horyaalka La Liga) – Gool FM
Haaruun November 29, 2020
(Barcelona) 29 Nof 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa inay dib ugu soo laabato wadada guusha horyaalka La Liga marka ay naadiga Osasuna galabta oo Axad ah ku soo dhoweynayaan garoonka Camp Nou.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Ronald Koeman ayaa la dhibtoonaysa guuldarradii 1-0 ee ka soo gaartay Atletico Madrid todobaadkii la soo dhaafay, waxaana ay fadhisaa kaalinta 14-aad ee kala sarreynta horyaalka La Liga.
Dhinaca kale Kooxda Osasuna ayaa fadhisa meel hal dhibic ka hooseysa Barcelona, kooxda reer Catalan ayaana isku dayi doonta bal inay cagta ku dhigto saddexda dhibcood ee kulankan si ay dib ugu soo laabato wadada guulasha ee horyaalka La Liga.
Taariikhda: Axad 29 Nof 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 4:00 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Gerard Pique ayaa dhaawac jilibka ah garoomada uga maqnaan doona ilaa bisha Maarso, taasoo ka dhigan inaan arki doono Oscar Mingueza oo ka sii ciyaaraya daafaca dhexe ee Barcelona.
Sergio Busquets ayaa weli ka soo kabsanaya dhibaato jilibka ah laftiisa, taasoo la micno ah in haddii uu kulankan diyaar noqon waayo in Frenkie De Jong ay u badan tahay inuusan ka soo laaban doonin khadka dhexe oo uu u geli doono afarta daafac.
Sergi Roberto ayaa garoomada ka maqnaan doona sidoo kale illaa bisha Janaayo, taasoo macnaheedu yahay in Sergino Dest uu sii wadan doono ka ciyaarista booska garabka midig ee daafaca kooxdiisa.
Osasuna ayaa la filayaa inay la tagto saddex daafac, inkastoo ay dhaawacyo ku maqnaayeen David Garcia iyo Aridane Hernandez.
Jony iyo Nacho Vidal waa in loo istcimaalaa garabyada-dambeedka.
Ruben Garcia ayaa la filayaa inuu weerarka kula weheliyo Ante Budimir, iyadoo labada xiddig laga doorbido Enric Gallego.
>- Kooxda Barcelona ayaan la garaacin 33 kulan oo ka mid ah 35-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Osasuna ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay bannaanka ku soo ciyaareen horyaalka La Liga.